युएईमा भिजिट भिसामा हुनुहुन्छ र म्याद सकियो ? या छुट्टीमा गएपछि भिसाको म्याद सकियो ? भने अब चि*न्ता नलिनोस ! युएईले बनायो यस्तो नयाँ नीति – Butwal Sandesh
युएईमा भिजिट भिसामा हुनुहुन्छ र म्याद सकियो ? या छुट्टीमा गएपछि भिसाको म्याद सकियो ? भने अब चि*न्ता नलिनोस ! युएईले बनायो यस्तो नयाँ नीति
युएई । तँपाई युएईमा भिजिट भिसामा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुस्। युएई सरकारले तपाईको समस्या समाधान गर्न नयाँ नीति ल्याएको छ। अब मार्च १ तारिकभन्दा पछि तपाईंको भिसाको म्याद सकिएको छ र रिन्यु पनि भएको छैन र नेपाल फर्कन पनि पाउनु भएको छैन चिन्ता नलिनुस् । सन् २०२० को अन्त्य सम्म तपाईको भिसा अवधि मान्य हुनेछ।
युएई सरकारले मार्च १ तारिकभन्दा पछि सकिएका भिसालाई २०२० सम्म नै मान्यता दिने भएको छ। युएई वा युएई बाहिर बिदामा घर फर्कनुभएको छ तर कोरोनाका कारण यूएई फर्कन पाउनु भएको छैन भने पनि त्यसका लागि सो अवधिसम्म मान्ने हुन्छ । यूएईको आवासीय भिसा भएकाले १ मार्च पछाडि अवधि सकिएमा २०२० भरी नै अवधि थपिने छ।
त्यसैगरि, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार फिर्ता गर्न विभिन्न मुलुकले दिएको दबाबलाई नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको छ। अन्य मुलुकहरूले आफ्ना कामदार फिर्ता लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि नेपाल भने छलफलकै चरणमा रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा मुना कुँवरले लेखेकी छन्।
कोरोनाको सं क्रमणबाट जोगिन कुवेतले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई आममाफीमार्फत फिर्ता गर्न सूचना जारी गरेर आवेदन मागेको छ। त्यस्तै, युएईको मानव संसाधन तथा इमिरेटिजेसन मन्त्रालयले आप्रवासी कामदारलाई फिर्ता लैजान सम्बन्धित मुलुकलाई सूचित गरेको छ। माल्दिभ्सले बन्द भएका होटेलका आप्रवासी कामदारलाई निश्चित पारिश्रमिक र फिर्ता टिकटको समेत व्यवस्था गरिदिएको छ।
आममाफीसहित फिर्ता हुन आवेदन दिने कामदारलाई कुवेतले आफ्नै खर्चमा विमान चार्टर्ड गरी सम्बन्धित मुलुक पठाउने तयारी गरेको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले बताए । कुवेतले कामदारलाई फेरि आउन पाउने गरी माफी दिएको उनले बताए । सामान्य अवस्थामा कुवेत सरकारले यस्तो खालको आममाफी दिँदैन । केसीका अनुसार कुवेतमा करिब ४ हजार गैरकानुनी नेपाली कामदार छन् भने ७० देखि ७२ हजार नेपाली श्रमिक छन् । जसमध्ये १० हजारभन्दा बढी कामदार नेपाल फर्किन इच्छुक छन् ।
कतारस्थित गैरआवासीय नेपाली संघको अध्ययन अनुसार आइतबारसम्म युएईमा रहेका ५ हजारभन्दा बढी कामदारले स्वदेश फर्किन आवेदन दिएका छन् । संघका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो रहेको बताए । आवेदन दिनेमध्ये ६० प्रतिशत दुबई, २४ प्रतिशत आबुधाबी र ९ प्रतिशत सारजाहमा रहेका कामदार छन् । संघले युएईको आबुधाबी, दुबई, सारजाह, अजमान, रसअल खेमा, फुजेरा र उम अल ब्वेन गरी सातैवटा प्रदेशमा अध्ययन गरेको थियो।
माल्दिभ्समा रहेका नेपाली कामदारमध्ये करिब ५ हजार स्वदेश फर्किन इच्छुक छन् । कामदार फिर्ता गर्न सम्बन्धित मुलुकहरूले दबाब दिए पनि नेपाली दूतावासले भने चासो देखाएका छैनन् । कामदार फिर्ता गर्ने विषयमा दूतावासले कुनै तयारी समेत गरेको छैन् । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले गैरकानुनी रूपमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई फिर्ता पठाउने विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतमा १५ लाख, चीनमा ८ हजार, जापानमा १ लाख, अमेरिकामा २ लाख, क्यानडामा १५ हजार, इटालीमा ५ हजार, जर्मनीमा १५ हजार, पोर्चुगलमा ५ हजार, फ्रान्समा ५ हजार, बेलायतमा १ लाख ५० हजार, ओमानमा १७ हजार, इराकमा १५ हजार, मलेसियामा ७ लाख, अस्ट्रेलिया १ लाख, स्पेनमा १५ हजार, बहराइनमा ३५ हजार, थाइल्यान्डमा ५ हजार, कुवेतमा ७० हजार, हङकङमा १५ हजार, सिंगापुरमा ५ हजार, दक्षिण कोरियामा ४२ हजार, इजरायलमा १२ हजार, नर्वेमा १ हजार, अस्ट्रियामा १५ सय, स्विडेनमा १ हजार, इरानमा २५ जना रहेको औपचारिक तथ्यांक छ। अनौपचारिक रूपमा धेरै नेपाली विदेशमा रहेकाले यकिन तथ्यांक निकाल्न मुस्किल रहेको शर्माले बताए।